ဥရောပမှာတော့ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ဆိုဒ်များ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပမှာတော့ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ဆိုဒ်များ
ဥရောပသန်းပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ကြောင်းယူနက်စကိုကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်က်ဘ်ဆိုက်များအတွက်ပေါများ ခရီးသွားဧည့်. တစ်ဦးရှိပါတယ် မြင်ကွင်းများ၏အမျိုးမျိုး ကြည့်ရှုရန် - ဗိသုကာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအထိမ်းအမှတအနေဖြင့်, ဟောငျးကုန်းတွင်းပိုင်း၏သဘာဝအအံ့ဘွယ်သောအမှုမှ.
ကနေရွေးချယ်ဖို့ဤမျှလောက်များစွာသောအရပ်တို့ကိုအတူ, တစ်ခရီးသွားနှင့် ပတ်သက်. ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလုပ်ဘို့ကခက်ခဲနိုင်ပါတယ် ခရီးလမ်းဆုံး. သင်ပထမဦးဆုံးကြည့်ရှုရန်ဥရောပ၌ဖြစ်သောယူနက်စကိုကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်က်ဘ်ဆိုက်များကိုရှေးခယျြကူညီရန်, ကျွန်တော်တစ်ဦးတိုတောင်းသောစာရင်းပြုစုခဲ့ကြ:
ပြင်သစ်တွင်အများဆုံးထင်ရှားတဲ့ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်က်ဘ်ဆိုက်များအချို့သည်ဗာဆိုင်းနဲ့တူအံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ပါဝင်သည်. ၎င်းသည်အကျော်ကြားဆုံးနှင့်ခမ်းနားထည်ဝါသောတော်ဝင်နေအိမ်ဖြစ်သည် ပြင်သစ်. ဖော်ပြနောက်ထပ်လှပသောရာအရပျ, Saint-Savin-sur-Gartempe ၏ Abbey ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာ Poitou အတွက်9ရာစုကနေ Romanesque အသင်းတော်ဖြစ်၏, အသစ်က Aquitaine.
ဘာသာရေးအရာဝတ္ထုကြည့်ဖို့ခစျြတဲ့သူခရီးသွားများအတွက်, အဆိုပါ Chartres ဘုရားရှိခိုးကျောင်းလည်းရှိပါတယ်. 13 ရာစုကနေဒီရိုမန်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းမှာရက်စွဲများ, သငျတို့သအနောက်တောင်ဘက်ကရှာတှေ့နိုငျ ပဲရစ်. နောက်ဆုံး, ရှိသည် Mont Saint-Michel နှင့်၎င်း၏ပင်လယ်အော်. ဒါဟာကနေချိန်းတွေ့မဟာဗျူဟာမြောက်ခံတပ်နှင့်အတူကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်ပါသည် 8 အေဒီ, နှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းအဖြစ်၎င်း၏အဓိကဖွဲ့စည်းပုံ.
Lyon Highspeed ရထားမှပဲရစ်
ပဲရစ် Strasbourg မှရထား
လူဇင်ဘတ် Strasbourg မှရထား
နန်စီ Strasbourg မှရထား
ဘေဆယ် Strasbourg မှရထား
အီတလီနိုင်ငံယူနက်စကိုကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ဆိုဒ်များနှင့်ပြည့်ဝ၏, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကလူသိအများဆုံးသူမြားအချို့ကိုဖော်ပြပါမယ်. ကျနော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးရပ်တန့်ဟာရှိပါတယ် ပေါင်ပေ၏ရှေးဟောင်းသုတေသနဒေသများ, ဟာကြူနှင့် Torre သုတေသန. သူတို့ရဲ့အရေးပါမှုကိုသူတို့ Mt ၏မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုအတွက်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံကြသည်ဟုမြို့ရွာများ၏ရှေးဟောင်းရုပ်ကြွင်းများမှာဆိုတဲ့အချက်ကိုတည်ရှိသည်. အတွက် Vesuvius 79 အေဒီ. Castel del Monte လည်းရှိပါသည်, 13 ရာစုကနေရဲတိုက်ချိန်းတွေ့. ဒါကြောင့်ဥရောပများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပေါင်းဘော်ရောနှောပြီးကတည်းကEan Cistercian Gothic အဘိဓါန်နှင့်မွတ်စလင် ဗိသုကာအတတ်ပညာ, ကစိတ်ဝင်စားဖွယ်မျက်မှောက်ဖြစ်ပါသည်.
ထို့အပွငျ, ဒါ့အပြင်အီတလီနိုင်ငံ Pisa အတွက် Piazza del Duomo မှနေရာဖြစ်သည်, နာမည်ကြီးဂိုဏ်းမျှော်စင်. နောက်ဆုံး, အဆိုပါရှိပါတယ် သမိုင်း နှစ်ခုကအဓိကမြို့ကြီးများ၏စင်တာများ, Florence နှင့် ရောမမြို့. Florence မှာ, အဆိုပါ Renaissance ဗိသုကာစတိုင်ကိုယ်စားပြုအဆောက်အဦတစ်ခုမဖြစ်မနေ-မြင်ကြသည်. အဆိုပါ Uffizi လက်လွတ်မနေပါနဲ့, စန်တာ Croce ၏ Basilica, နှင့် Florence ဘုရားရှိခိုးကျောင်း. ရောမမွို့ရှိ, သငျသညျအထိမ်းအမှတနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဆိုဒ်များတစ်ကျယ်ပြန့်အရေအတွက်ကိုနှင့်အတူရောမအင်ပါယာ၏ဗဟိုနှင့်ကက်သလစ်ကမ္ဘာကြီးကိုစူးစမ်းဖို့ရှိသည်.
Bari က Florence မှရထား
Salerno Florence မှရထား
ဂျာမဏီရဲတိုက်တစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်, ဘုရားရှိခိုးကြောငျး, နှင့်အခြားအံ့သြဖွယ်ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်က်ဘ်ဆိုက်များ. Aachen ဘုရားရှိခိုးကျောင်း Charlemagne များ၏သင်္ချိုင်းရာအရပျမြားနှငျ့ရှေးကတည်းကပထမဦးဆုံး-built အောက်တိုက်ဖွဲ့စည်းပုံမှာဖြစ်ပါသည်. အတွင်းလူကြိုက်အများဆုံးမှတ်တိုင် ဂျာမနီ အခြားဘုရားကျောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်, ဤ Cologne အတွက်တဦးတည်း. ဒါဟာကနေစတင်တည်ဆောက်မှရာစုနှစ်များစွာ ယူ. , 1248. ထို့အပွငျ, ရောမအင်ပါယာ၏နယ်စပ်ဒေသကိုလည်းသွားရောက်လည်ပတ်ရကျိုးနပ်များမှာ. လူတိုင်း Hadrian က Wall နှင့် Antonine အမှတ်တရကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်, built-in ခဲ့ပြီးသော 122 အေဒီနှင့် 142 အေဒီ, လိုအပ်သလို.
အထက်အလယျပိုငျးရိုင်းချိုင့် Exploring တစ်ခုမမေ့နိုင်သောဖြစ်မယ့် အတှေ့အကွုံ. ဤဒေသ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်နေရာဖြစ်သည် ရဲတိုက် နှင့်သမိုင်းဝင်မြို့ရွာ. နောက်ဆုံး, တရားရုံးဥယျာဉ်နှင့်အတူ Wurzburg Residence နှင့် Residence ရင်ပြင်ရှိ. ဒါဟာဂျာမနီအတွက်အကြီးမားဆုံးဘုံဗိမာန်တစ်ခုဖြစ်တယ်, Rococo စတိုင်များစွာသောသာဓက.
ဤရွေ့ကားဥရောပတိုက်တွင်အများအပြားအံ့သြစရာယူနက်စကိုကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ဆိုဒ်များအနည်းငယ်ရှိပါတယ်. ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုချက်များနှင့်အတူ, သငျသညျကမှားမသွားနိုင် သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်. သငျသညျအမြိုးမြိုးကိုအဓိကအနေဖြင့်ရထားဤတည်နေရာကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် ဥရောပမြို့ကြီးများ.
ဘာလင် Aachen မှရထား
Cologne ရထားမှ Dresden
Cologne ရထားမှ Aachen
ဥရောပကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိပါတယ်ဘယ်အရာကိုစူးစမ်းဖို့အဆင်သင့်? မှတ်သားလောက်ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်က်ဘ်ဆိုက်များသို့သင့်ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့် သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင် ယနေ့တွင်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ:https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/unesco-world-heritage-sites-europe/- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
europetravel longtrainjourneys trainjourney Tranride မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ travelfrance travelgermany travelitaly ယူနက်စကို